Faahfaahin Laga Helayo Qaraxyo Ka Dhacay Muqdisho. – Calamada.com
Faahfaahin Laga Helayo Qaraxyo Ka Dhacay Muqdisho.
calamada August 15, 2018 1 min read
Qaraxyadan oo ahaa labo ayaa lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta waxaana ka dhashay khasaare isugi jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray maleeshiyaadkii lala eegtay.
Qaraxa 1aada oo ka dhacay degmada Hiliwaa ee magaalada muqdisho ayaa lala beegsaday mooti bajaaj ay saarnaayeen askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta. Waxaana qaraxaas ku baqtiyay hal askari oo murtad ah,Halka mid kalana uu dhaawac halis ah soo gaaray.
Markii qaraxaas u dhacay kadib waxa goobta soo gaaray maleeshiyaad murtadiinta ah oo wata gaari nooca dagaalka ah kuwaas u soo gurmaday saxiibadooda qaraxa lagu burburiyay bajaajtii ay saarnayeen.
Daqiiqo kadib waxa isla goobta ka dhacay qarax kale oo lala eegtay gaari dagaal oo ay maleeshiyaadkii soo gurmaday ay wateen. Waxaana soo gaaray waxyeello xooggan halka askari saarnaydnaa ay dhaawacyo soo gaareen.
Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkasi qaraxa ah. ee maanta ka dhacay degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho.
Degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho ayaa marti galinaya dhamaan noocyadda kale duwan ee weerarada mujaahidiinta kuwaas oo ku wajahay saliibiiyinta iyo murtadiinta xoogga ku haysta magaalada caasimada ah ee muqdisho
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 04-12-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 04-12-1439 Hijri.